TV Series – Channel Myanmar
Supergirl Tv Series (Season 1 Complete)
Ugly Duckling Don’t (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး ပေါ့ပေ့ါပါးပါးလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ထိုင်းဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ကိုကြည့်ရှုကြစို့ ဇီရိုးဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ မဟုတ်မခံ သူ့ကျောင်းမှာဆိုရင်လည်းလူစွာလူမိုက်... အဲ့ဒီကျောင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့ ကျောင်းသူလေး Maewnam.... Maewnam ဆိုတာကလည်း ငယ်ငယ်ကတည်းက သူ့ကို ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောရင် ဆိုက်ကိုဝင်ပြီး လူရှေ့သူရှေ့ထွက်မပြရဲသူ.....သူ့မျက်သူတောင်မပြရဲလို့ မျက်နှာကို ကတ်ထူပုံးစွပ် တက်ခံရပေမယ့် ကျောင်းမှာတကယ်ခင်တဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့တယောက်ရရှိခဲ့ပြီး ဇီရိုးဆိုတဲ့ ကောင်လေးကရော ရုပ်ဆိုးမလေးနဲ့ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြအုံးမလဲဆိုတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်ချစ်ဇာတ်လမ်းတွေဟာဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မှာလဲ... သံယောဇဉ်တွေ ကိုပဲအရင်ဆောက်တည်မှာလား...အချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲဆောက်တည်မှာလား မေးခွန်းတွေ နဲ့ ကြည့်ရမှာမို့ သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့အဖြူရောင်စိတ်ကိုပဲ ဆေးဆိုးကြမှာလားဆိုတာကို စောင့်မျော်ကြည့်ရင်း အားပေးကြပါအုံးစို့ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကိုတော့ ကိုအောင်ပြေကရေးသားပေးခဲ့တာပါ) အားလုံး အပိုင်း ၇ပိုင်းရှိပြီး ဆက်လက်တင်ပေးသွားမှာမို့ အားပေးလိုက်ကြပါအုံးဗျာ အပိုင်း၆ ကို မြန်မာ အင်္ဂလိပ် ၂ဘာသာဖြင့် Subtitle ထည့်ပေးထားသေကြောင့် Vlc ဖြင့်ကြည့်ပါက Subtitle >> Sub track တွင် Track2အားရွေးချယ်ကြည့်ရှူရမည်ဖြစ်ပြီး ဖုန်းဖြင့်ကြည့်ရှူပါက MX Player တွင် Subtitle option တွင် Track2အား အမှန်ခြစ်ပေးကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။ File size...(400MB) Quality...BR-Rip 720p Format...mp4 Duration....01:44:24 Subtitle....Myanmar Subtitle (Hardsub) Translator .......Wut Mone Encoder.... Aung Pyay Episode ...
Ugly Duckling Don’t (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Arrow (Season 4) TV Series Arrow season4အတွက် အချိန်ကျလာပါပြီဗျာ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်း လူတွေက အဲရိုးသေသွားပြီလို့ပဲ သိထားကြတာပါ။ အဲရိုးတို့ စုံတွဲဟာလဲ မြို့ရဲ့ အဝေးတစ်နေရာမှာ ပျော်ရွှင်နေကြပါပြီ။ မြို့အတွက်တော့ အဲရိုးရဲ့ညီမရယ် Black canary ရယ် ဒစ်ဂယ် ရယ်က ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစီစန်မှာတော့ သူတို့ ချည်းပဲ မဖြေရှင်းနိုင်တော့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုပေါ်လာပါပြီ။ H.I.V.E လို့ ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးဟာ မြို့က အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက လူအားလုံးကို သတ်ပြီး မြို့ကို တစ်စစီပြိုကွဲစေပါတော့မယ်။ သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကတော့ စီစန် ၃ မှာ နာမည်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ ရေရှယ်ဂူး ရဲ့ ပြိုင်ဘက် ရန်သူတော်ကြီး ဒေမီယန် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လက်ရှိအမြင်အရတော့ ရာရှယ်ဂူးထက်ပိုစွမ်းနေပါတယ်။ အဲရိုးရဲ့ မြှားတွေကို စွမ်းအားတစ်မျိုးနဲ့တားထားနိုင်နေလို့ပါပဲ။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ပရိသတ်အားလုံးကို ဆွဲဆောင်သွားနိုင်တာတော့ နောက်ခြောက်လအကြာမှာ ...
The Pacific(2010) – မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb rating 8.3Metacritic rating 86%TV.com 7.4 အထိ rating အမြင့်တွေရရှိထားတဲ့ The Pacific (2010) ကို Channel Myanmar မှ တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ mini-series ဖြစ်ပြီး အပိုင်းအားလုံး (၁၀)ပိုင်းရှိပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအစကတော့.... ပုလဲဆိပ်ကမ်းဗုံးကျဲခံရပြီး နှစ်ဝက်အကြာ အာရှတိုက်သား ဂျပန်တို့က လူ့သမိုင်းတလျှောက်အကြီးမားဆုံးအင်ပါယာကြီးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၄၂ မှာပဲသြစတီးလျကိုအခြေချဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဂျပန်တွေဟာ တပြိုင်နက် တောင်ပစိဖိတ်ကျွန်းတွေကိုပါ ချဲ့ထွင်ဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ကြတယ်။ Guadalcanal. ကျွန်းမှာ လေယဉ်ကွင်းဆောက်နေကြပြီး ဒီလေယဉ်ကွင်းသာပီးဆုံးမယ်ဆိုရင် သြစတီးလျကိုကူညီမယ့်အမေရိကန်တို့ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးကိုပိတ်ဆို့ထားနိုင်ပါပြီ။ ဒီတော့အမေရိကန်တွေအနေနဲ့ ဒီကျွန်းကိုမဖြစ်မနေ ရအောင်ယူမှကိုရတော့မယ်။ဒီအတွက်အမေရိကန်တွေ ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ . ဘယ်တပ်ဖွဲ့တွေသုံးပြီးဒီကျွန်းကိုပြန်ယူကြမလဲ . . .ပုလဲဆိပ်ကမ်း ဟာဝါရီကျွန်းတွေအတိုက်ခံရပြီးချိန်မှာ အမေရိကန်စစ်သားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဂျပန်ဆိုတာတိုက်မရတဲ့ လူတွေလို့စွဲနေတဲ့အချိန်....ဒီအစွဲတွေကိုဘယ်လိုချွတ်မလဲ . . . စတာတွေကို ဇာတ်ကားထဲမှာ သိမြင်နိုင်မှာပါ။ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ band of brother လိုပဲ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်ကနေ ...
The Pacific(2010) – မြန်မာစာတန်းထိုး
Death Note TV Series (2015) အခုတင်မဲ့စီးရီးကတော့ ဂျပန်ဇာတ်ကားကောင်းကြိုက် ပရိသတ်ကြီးအတွက် Death Note(2015) Series ပါ အရင် DeathNote movie တုန်းကလိုပဲ Kira(Light) နဲ့ L တို့ရဲ့ ကြားထဲက ကစားပွဲလိုပါပဲ DeathNote ဟာ ဂျပန် မန်ဂါ ကနေပြီးတော့ Live Action ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းပါပဲ Movie တုန်းကတော့ အကျဉ်းချုံးသဘောမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ Series ပြန်ရိုက်တဲ့အခါမှာတော့ မန်ဂါထဲကဇာတ်လမ်းတွေ အတတ်နိုင်ဆုံး စုံအောင်ပြန်ရိုက်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းသွားကတော့ Light တစ်ယောက် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အနိုင်ကျင့်ခံရတာကနေ မကျေနပ်စိတ်တွေဖြစ်တုန်း သေမင်း Ryuk နဲ့တွေ့ Deathnote စာအုပ်ကို ရလာပါတယ် ဒီစာအုပ်မှာ နာမည်ရေးခံရရင် အဲ့ဒီသူဟာ စက္ကန့်၄၀ အတွင်းသေမှာဖြစ်ပါတယ် သေရမဲ့အကြောင်းရင်းကိုရေးထားရင် အဲ့ဒီအတိုင်းသေပြီးတော့ မရေးရင်တော့ နှလုံးရုတ်တရက်ဖောက်ပြီး သေမှာပါ Light တစ်ယောက် Death Note စာအုပ်နဲ့ Lကို ဘယ်လို ...
The King Of Food (မြန်မာစာတန်းထိုး) ကိုရီးယား တီဗီ အစီအစဉ်တွေ တော်တော်များများ အခုတလော ကြည့်ဖြစ်နေတယ်Star King တို့ Running Man တို့ လိုမျိုး ပုံစံ သိပ်မတူတဲ့ ဗဟုသုတတွေ မေးပြီးဆု အဖြစ် စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေ စားရမယ့် တီဗီ အစီအစဉ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့The King Of Food နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကို ကြည့်လို့ သဘောကျပြီးCM ပရိတ်သက်တွေ အတွက် ပြန်လည် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...အပိုင်း ၁ ကို ကြည့် ပြီး သဘောကျတယ် ဆိုရင် ကျန်တဲ့ ၂ ပိုင်းကို ဆက်တင်ပေးပါ့မယ်..Download Link===============King Of Food 1 (582MB)King Of Food2(573MB)King Of Food3(574MB)Thit San Khant----------------------------www.facebook.com/thitsankhant2
The King Of Food (မြန်မာစာတန်းထိုး)
Constantine – First Season Complete ( 2014 ) မြန်မာစာတန်းထိုး မနှစ်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ Channel Myanmar ကနေ Constantine စီးရီးရဲ့ပထမဆုံးအပိုင်းတပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်..အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဆက်လက်မတင်ပေးနိုင်တော့ပဲရပ်နားလိုက်ရပါတယ်.အခုအချိန်မှာတော့ Constantine စီးရီးရဲ့ အစအဆုံး အကုန်လုံးကိုတပြိုင်နက်ထဲအားလုံးတင်ပေးလိုက်ပါပြီကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမကြည့်လိုက်ရပဲ စောင့်မျှော်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကျေနပ်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်Constantine ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်ဟာ DC Comics ရဲ့နာမည်ကြီးဇာတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်..2005 တုန်းကလည်း တကားတည်းအနေနဲ့ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူကတော့ Matrix မင်းသားkeanu reeves ပါ...အောင်မြင်ခဲ့တယ်လည်းဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်..2014မှာတော့ Series တွဲအနေနဲ့ဇာတ်လမ်းပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့ပါတယ်.. Season 1 ခုသာပြီးခဲ့ပေမယ့် ဒီ TV Show ဟာဆက်လက်ရိုက်ကူးခြင်းမရှိပဲ Cancel လုပ်လိုက်ပါတယ်..ဒါကြောင့် တခြား season တွေထပ်မရှိလာပဲနဲ့First Season တခုတည်းသာရှိတာမို့ ကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့လည်းအစအဆုံးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဂျွန်ကွန်စတန်တင်းဟာ မကောင်းဆိုးဝါးနှိမ်နင်းတဲ့တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်..သူ့ဘ၀တခုလုံးကို ဒီလောက ထဲအတွင်းမှာပဲ မြှုပ်နှံထားပြီးတော့ ငရဲပြည်နဲ့ရော..ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ပါဆက်ဆံရတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်..ငရဲပြည်ကတော့ သူ့ကိုအမြဲတမ်းသတ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးကောင်းကင်ဘုံကတော့ ဂျွန် နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ သဘောတူညီမှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်..မကောင်းဆိုးဝါးတွေကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ သူတွေကို ၀င်ဝင်ကူညီပေးတတ်ပြီး ငရဲနဲ့ကောင်းကင်ရဲ့စစ်ကြားမှာ ကန့်လန့်ဖြစ်နေတဲ့ ဂျွန် ကွန်စတန်တင်းရဲ့ ...
Constantine – First Season Complete ( 2014 ) မြန်မာစာတန်းထိုး
The X-File TV Series (မြန်မာစာတန်းထိုး) The X-File ဆိုတာ FBI အဖွဲ့ကြီးက Close Case လုပ်လိုက်တဲ့ ဖိုင်တွေပါလူသတ်မှု မှာ မဖြေရှင်းနိုင်တာ မဖော်ထုတ်နိုင်တာတွေပေါ့အဲ့ဒီ X-File ဆိုတာကလဲ UFO နဲ့ ပရလောက ဆက်စပ်ကျူးလွန်တဲ့အမှုအခင်းတွေ ဖြစ်ပြီး သာမန်မျက်စိ နဲ့ မမြင်နိုင် သာမန် ဦးနှောက်နဲ့လိုက်မမှီနိုင်တဲ့ အမှုတွေပေါ့...FBI ကနေ ၀ိုင်းပယ်ထားတဲ့ လူထူးလူဆန်း တစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်...သူကတော့ FBI Agent မော်ဒါ ပါ...သူက UFO နဲ့ ပရလောက ကို အတည်ပြုပြီး တစ်ခြား စုံထောက်တွေ မဖော်ထုတ်နိုင်တာတွေကိုထူးထူးဆန်းဆန်းရှာဖွေ ဖော်ထုတ်တက်သူပါ အစိုးရ ကလဲ တစ်ချို့ကိစ္စတွေကိုဖုံးကွယ်ထားပါတယ် ဒါကြောင့် မော်ဒါ ဘယ်လောက်သိနေတယ် ဆိုတာကို စိုးရိမ်လာတဲ့အတွက်အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ဖို့ Agent စကာလီ ကို စေလွှတ်လိုက်ပါတယ်..ဒါပေမယ့် FBI Agent စကာလီ ဟာလဲ မော်ဒါ ...
The X-File TV Series (မြန်မာစာတန်းထိုး)